Crime – Yourcinema
IMDB: 5.8/10 38,675 votes
Psych 2: Lassie Come Home ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ American Comedy Film တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခုနှစ် 2020Released ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ် ၂၀၀၆ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင်စီးရီးအနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့ဖူးပြီး Season 8ခု Total 120 Episodes ထိရှိခဲ့ပါတယ် ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ Psych : The Movie ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေနဲ့ထွက်ရှိလာပြီး အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီးနောက် အခုနောက်တစ်ကားထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်💙 ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ရှောန်နဲ့ဂတ်စ်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ရောက် သူတို့ရဲ့ ရဲမှူးဟောင်း လတ်စီကို ကူညီပေးဖို့အတွက် ဆန်တာဘာဘရာဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့နေ့မှာတင် ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ အမှုတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ် ထုံးစံအတိုင်း သူတို့နှစ်ယောက် အဲ့ဒီအမှုကိုလိုက်ရင်း ဘာတွေဘယ်လို လွဲချော်ပြီး ဘာတွေဘယ်လို ဖော်ထုတ်ကြမလဲဆိုတာ ရယ်မောပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်💙 IMDb Rating 7.7/10ထိရရှိထားပြီး တစ်ကားလုံး မပျင်းမရိဘဲ တစ်ထိုင်တည်းကြည့်ရှုသွားနိုင်ဖို့ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်💙 (အညွှန်းနှင့် ဘာသာပြန် MinnMyoKhant) IMDb Rating - 7.7/10🔥 Genre - Comedy, Crime, Mystery Quality - 1080P, 480P Translator - MinnMyoKhant Encoder - လူယုတ်မာ ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ ...
IMDB: 7.7/10 1,841 votes
Triple Frontier Triple Frontier (2019) ဓားပြတိုက်တဲ့ကား.. သာမာန်ဓာပြတိုက်တဲ့ကားတွေနဲ့မတူတာက ဘဏ်မှာ ဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး..တကယ့်ကြမ်းရမ်းပါပေ့ဆိုတဲ့ မူးယစ်ရာဇာ အိမ်ကိုမှ ဝင်စီးတာ.. Netflix က 2019 မှာ ထုတ်တဲ့ Action နဲ့ Drama ကား...ဇာတ်အိမ်လဲမိုက်စ်!! ဇာတ်လမ်းက နိုင်ငံအတွက် အသေအကြေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့က စစ်မှူထမ်းဟောင်းသုံးယောက် စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေကြရတာ.. သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က မူးယစ်နှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီး နာမည်အကြီးဆုံး မူးယစ်ရာဇာကို သတင်းရဖို့လိုက်တာက စတာပဲ.. မူးယစ်ရာဇာ ဥနေတဲ့နေရာကို သူသိသွားတော့ သူ့ တပ်ပြန်ဘော်တာတွေတစ်ယောက်ချင်းစီလိုက် စည်းရုံးပြီး ဝင်စီးတော့တာပဲ.. ဒါပေမဲ့ ပြသနာက မူးယစ်ရာဇာက သာမန်မြို့ထဲမှာမဟုတ်ပဲ ပြန်ထွက်ရအရမ်းခက်တဲ့နေရာမှာ ဆိုတော့ သူတို့ ဓားပြတိုက်ပြီး ပြန်ထွက်နိုင်ပါ့မလား.. ဖွက်ထားတဲ့ ငွေတွေကိုရော သူတို့ရှာတွေ့ကြပါ့မလား..ကိုယ်မထင်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြုံပြီး ဘယ်လိုတွေ တိုင်ပတ်ကြမလဲဆိုတာ ရင်တဖိုဖိုနဲ့ကြည့်ရမဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါလို့ တင်ဆက်ရင်း.. ဘာသာပြန် = Arkar Encoder = လူယုတ်မာ ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ 1080P [1.4 GB] ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ 480P [404 ...
IMDB: 6.4/10 100,782 votes
Yaara Yaara (2020) Your Cinema ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ၃၀.၇.၂၀၂၀နေ့မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ အိန္ဒိယ ဇာတ်ကြမ်း ရုပ်ရှင်တစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်... ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာ လူမိုက်တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် မိဘမဲ့လေးများဖြစ်သွားရရှာသော ကလေးနှစ်ယောက်။ လူမိုက်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရင်း မှောင်ခိုရာဇာ တစ်ဦးနဲ့ဆုံမိကြတယ်... ထိုမှောင်ခိုရာဇာအဖွဲ့ဟာ ကလေးသူငယ်များကိုအသုံးချပြီး မှောင်ခိုလုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ကျူးလွန်ကြတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ မှောင်ခိုရာဇာတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် စုစုပေါင်းကလေး4ယောက်တို့ဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ မှောင်ခိုလောကရဲ့ဘုရင်များဖြစ်လာကြတယ်... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ သိချင်ရင် ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်... ဘာသာပြန် = Maung Pyae Aye Encoder = လူယုတ်မာ ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ 1080P [1.7 GB] ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ 480P [511 MB]
IMDB: 6/10 1,211 votes
The Neighbor ဒီကား​လေးက​တော့ 2016 ခုနှစ်ထွက် horror thriller ကား​ကောင်းတစ်ကားပါ ဂျွန်နီတို့စုံတွဲက မြို့​လေးတစ်ခုက ဆင်​​ခြေဖုံး​နေရာမှာ​နေပါတယ် ဂျွန်နီက​တော့ သူ့ဦး​လေးဆီမှာ တရားမဝင်ပစ္စည်း​တွေ ပို့တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် ဒါ​ပေမယ့်သူက ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ကုန်​နေပြီး​တော့ သူတို့လိုအပ်သ​လောက်​ငွေစုမိရင် အဲ့အလုပ်​တွေက​နေ ထွက်​ပြေးလွတ်​မြောက်ဖို့စဥ်းစားထားပါတယ် သူတို့​နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူ​တွေက ​တစ်​​ယောက်နဲ့တစ်​ယောက် ပတ်ပတ်သတ်သတ်လဲ သိပ်မရှိပဲ သေနတ်နဲ့ သား​ကောင်​တွေ အလကားပစ်ပစ်တာမျိုးလို ထူးဆန်းတာ​တွေ လုပ်ကြတာကို​တွေ့​ကြပါတယ် သူတို့မှန်းတားတဲ့ ပမာဏပြည့်လို့ ထွက်မသွားခင် ​​​ရှေ့တစ်ညမှာ သူတို့ဆီကို အိမ်နီးချင်းတစ်​ယောက်​က ညဥ့်နက်မှ အလည်လာခဲ့ပါတယ် ​နောက်ရက်နောက်ဆုံးအ​နေနဲ့ သူ့ဦး​လေးဆီ ​ငွေ​တွေသွား​ပေးပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ​တော့ သူ့​ကောင်မ​​လေး​ပျောက်သွားခဲ့ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဥ်တာ​တွေကို ​တွေ့ ရှိလိုက်ရပါ​တော့တယ်... သူတို့လွတ်​မြောက်ဖိူ့ လုပ်ထားတဲ့အစီအစဥ်​တွေ ​အောင်မြင်ပါ့မလား ​ကောင်မ​လေးကဘယ်​ပျောက်သွားတာလဲ အိမ်နီးချင်း​တွေနဲ့​​ရော ဘယ်လိုပတ်သတ်​နေမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်ပြီး အ​ဖြေရှာလိုက်ကြပါဦး Zawgyi ဒီကား​ေလးက​ေတာ့ 2016 ခုႏွစ္ထြက္ horror thriller ကား​ေကာင္းတစ္ကားပါ ဂြၽန္နီတို႔စုံတြဲက ၿမိဳ႕​ေလးတစ္ခုက ဆင္​​ေျခဖုံး​ေနရာမွာ​ေနပါတယ္ ဂြၽန္နီက​ေတာ့ ...
IMDB: 5.8/10 6,924 votes
A Bittersweet Life ဒီကားလေးကတော့ မင်းသားကြီး လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ ၂၀၀၅ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးပါ။ လီဗြောင်ဟွန်းနဲ့အတူ မင်းသမီး Shin Min-Ahနဲ့မင်းသား Kim Yeong-cheol တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ။ Rating ကတော့ 7.6 ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဉာဏ်ပညာရှိပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ ဆန်းဝူးဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ဉီးဟာ သူ့သူဌေးအပေါ် အကြွင်းမဲ့သစ္စာရှိမှုနဲ့ စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာကြောင့် သူဌေးဆီမှ ယုံကြည်မှုရထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးဖြစ်သူမှာ ငယ်ရွယ်ပြီးချောမောလှပတဲ့ ဟီဆိုးဆိုတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူဌေးက ဟီဆိုးဆီမှာ တခြား ချစ်သူရှိတယ်လို့ သံသယရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် သူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်နေစဉ်မှာ ဟီဆိုးကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ နဲ့ အကယ်၍ ချစ်သူရှိတာမှန်ရင် နှစ်ယောက်လုံးကို သတ်ပစ်ဖို့ ဆန်းဝူးကို အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းဝူးဟာ သူဌေးဖြစ်သူမှာကြားခဲ့သလို ဟီဆိုးအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်… ဟီဆိုးမှာ တကယ်ပဲတခြားချစ်သူရှိနေတာလား ရှိတယ်ဆိုရင် ဆန်းဝူးက သူဌေးအမိန့်အတိုင်း လုပ်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ...
IMDB: 7.6/10 34,932 votes
NH10 ကဲ…ဒီတစ်ခါတော့ သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ... PKမင်းသမီးလို့ လူတွေသိကြတဲ့ Anushka Sharmaရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့... ခေတ်လူငယ်စုံတွဲဖြစ်တဲ့အာရ်ဂျွန်းနဲ့မီရာဟာ မွေးနေ့ပွဲအထိမ်အမှတ်နဲ့ ခရီးထွက်လာပါတယ်... အမြန်လမ်းတစ်နေရာမှာ ခရီးတစ်ထောက်နားနေတုန်း ရန်လိုနေတဲ့လူတစ်စုက တခြားလူငယ်စုံတွဲနှစ်ယောက်ကို ကားပေါ်ဇွတ်တင်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကို အာရ်ဂျွန်ကမနေနိုင်လို့ ဝင်တားရာ အာရ်ဂျွန်းကို စောက်ခွက်တစ်ချက်ထိုးပြီး ကားမောင်းထွက်သွားပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ အာရ်ဂျွန်းတို့လဲခရီးဆက်လာရာ လမ်းတစ်နေရာမှာ ခုနက လူတစ်စုရဲ့ကားကိုတွေ့လိုက်တော့ နောက်ကနေ အသာလေးလိုက်သွားပါတယ်... လိုက်သွားရာကနေ အဲ့ဒီလူတစ်စုက ခုနကလူငယ်စုံတွဲကို သူတို့မျက်စိရှေ့မှာပဲသတ်လိုက်ပါတယ်... သူတို့နှစ်ယောက်ကော ဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးမလဲ... ဘာကြောင့် သတ်ဖို့ကြိုးစားကြတာလဲ ဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရမှာပါ... IMDb ratingက 7.2/10ထိရရှိထားပြီးတော့ တစ်ထိုင်တည်း မပျင်းမရိနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားပေးနိုင်တာမို့ သေချာပေါက် မလွှတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ... Genre - Action, Crime, Drama Translator - MinnMyoKhant Encoded by လူယုတ်မာ 👉ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ DropBox 720P [845 MB] 👉ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ MegaUp 720P [845 MB] 👉ဒေါင်းရန် နှိပ်ပါ Racaty 720P [845 MB] 👉ဒေါင်းရန် ...
IMDB: 7.2/10 11,813 votes
Article 15 Article 15 (2019) Mystery Typeကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကားတစ်ကား Recommendချင်ပါတယ် ✅ 2019 မှာ ထွက်ရှိပြီး IMDb 8.2 / 10 အထိ ရရှိထားတာမို့ ဇာတ်ပျင်းကြီး ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်သလို တခြားကားတွေလို ဒရာမာပဲ ချိုးနေတာ ခေတ်နောက်ကျပါတယ် ကွာ လို့ တွေးမိတာမျိုး ရှိမှာ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း အာမခံတယ် 😉 ခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးစန်းထလာပြီး လက်ရှိကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမင်းသားဆိုလဲမမှားတဲ့ မင်းသား ​Ayushmann Khurrana က Main Leadဖြစ်တာမို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ‌ေကာင်းအောင် ဆွဲဆောင်တယ် လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း မနေ့တနေ့ကမှ အရာရှိအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ "အာရ်ယန်းရန်ဂျန်" က သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ကျတဲ့နေရာ "လာဂွန်း"လို့ခေါ်တဲ့ တောရွာကို ရောက်လာတယ် ထုံးစံအတိုင်း အိန္ဒိယတောရွာအများစုလို ဇာတ်အနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားတာတွေ ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ အပြည့်ပေါ့ အဲ့လို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုက အစ ...
IMDB: 8.2/10 20,015 votes
Mermaid Legend ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့.၁၉၈၄လောက်တုန်းက.ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့.. စိတ္တဇဆန်တဲ့ဂျပန်drama ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... IMDb-6.8 Genres- Crime: Drama :Horror Awards.-3wins ဇာတ်လမ်းဇာတ်သွားကတော့...ညားခါစပူပူနွေးနွေးငါဖမ်းသမား လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ...သူတို့က.ရေအောက်ငုပ်ပြီစ ငါးတစ်မျိုးကိုရှာဖွေပြီး..အသက်မွေးကြတာပေါ့. အဲ့မှာ..မီယာမိုတိုဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက..သူတို့မြေတွေဝယ်ပြီးတော့အပန်းဖြေစခန်းဆောက်လုပ်ဖို့....ဆန္ဒပြင်းပြနေတာပေါ့.. အမှန်က..အပန်းဖြေစခန်းဆောက်ဖို့ဆိုတာက..ဟန်ပြသက်သက်တာဖြစ်ပြီးတော့.သူတို့ကနျူကလီးယာဓာတ်ပေါင်းဖိုစက်ရုံဆောက်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်... အဲ့လိုတည်​ဆောက်ဖို့..မြေဝယ်ရာမှာ..ရှိုုဟီးတို့ငါဖမ်းသမားလင်မယားကမရောင်းပဲဆန္ဒပြတာပေါ့..အဲ့တော့..မီယာမိုတိုကုမ္ပဏီက..သူတို့ကိုလုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တယ်... သူတို့ငါးဖမ်းထွက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့...မိန်မက..ရေအောက်ငုပ်ပြ်ိးငါးရှာတဲ့အချိန်မှာ.လှေပေါ်မှာရှိတဲ့..သူ့ယောကျာ်းအသတ်ခံလိုက်ရပါလေရော.. အဲ့မှာ.မိန်းမဖြစ်သူက..ကူရာမဲ့ဖြစ်ပြီး..မိန်းမတွေနေချည်းနေတဲ့ကျွန်းကိုရောက်သွားခဲ့ပြီး..အပျော်မယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့.. သူကသူ့ယောကျ်ားကို..သတ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး..သတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့..ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ.18+တစ်ချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်... ...အရင်ခေတ်ဂျပန်တို့ရဲ့..နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.... Translated & Review By Arkar Oo Encoded By Kar Yan
Wasp Network အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ Triller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားကိုအချိန်ပေးပြီး တွေးတောတဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရိိုက်ကူးထားသည့်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကို၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာတည်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းဆိုရလျှင် ကျူးဘားကနေ အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွေ့သွားသောလေယာဥ်မှူးကစတာပါ။ ကျူးဘားနိုင်ငံမှ မိသားစုကိုပစ်ထားပြီး ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။ကျူးဘာနိုင်ငံက အစားအသောက်ရှားပါးပြီး နေထိုင်ရခက်ခဲလို့အမေရိကန်ကိုပြောင်းလာတဲ့ပြည်ပြေးတွေကိုကူညီပေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက်တာဝန်ကျေခဲ့သော်လည်းမိသားစုကိုအချိန်မပေးခဲ့သောကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောမိသားစုအတွင်းရေး ရှုပ်ထွေးသော နိုင်ငံရေးပြသာနာတို့ကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်ဘယ်လို ရိုက်ပြထားသလဲဆိုတာ ရှုစားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ IMDb rating 5.8/10 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Translated & Review By Naw Sue Phaw Shee Encoded By Kar Yan
IMDB: 5.8/10 2,774 votes